हत्केलामा यस्तो चिन्ह हुने व्यक्ति हुन्छन् कम समयमै धनी, तपाईको हातमा पनि छ की ? – List Khabar
Home / धर्म सस्किर्ती / हत्केलामा यस्तो चिन्ह हुने व्यक्ति हुन्छन् कम समयमै धनी, तपाईको हातमा पनि छ की ?
admin August 16, 2021 धर्म सस्किर्ती Leaveacomment 186 Views
गर्दछन्। ती रेखाको प्रभाव हाम्रो जीवनमा अलग अलग तरिकाले पर्ने गर्दछ। हस्तरेखा विज्ञानका अनुसार हत्केलामा बनेका चिन्ह र रेखाले व्यक्तिको भविष्यमा हुने विभिन्न कुराका संकेत दिने गर्दछ।
जुन व्यक्तिको हत्केलामा कुनै विशेष किसिमको चिन्ह्र छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पद, धन र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई भाग्य बदल्ने रेखाका बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ।
Previous खोल ओढेर घिउ खाने फटाहा भन्दैँ उज्यालोका नायक कुलमानमाथि किन यसरी खनिए गुरु भट्टराई ?